Dia tokony hita taratra ao am-po i Jesosy
Ny izao tontolo izao ny Kristianina izay mila fo ireo dia mandoro sy ny fitaratra izay maneho an'i Jesoa Kristy.
Fony aho an-trano, dia hahita ahy any amin'ny fitaratra ka nilaza hoe: "Tsy Izaho va no nahita anao teo aloha?". Tsy nisy tena tsara dia tsy ho eto anatrehako, dia fantatrareo, mameno marary tahaka aho. Androany no fitaratra sary dia tsy mitovy, izao ianao faly ny an'i Jesoa Kristy sy ny ho zanany, na dia sy ny kileman-toetra sy ny fahadisoany.
Efa nahita ny tenanao ao amin'ny fitaratra ny herinandro?
Ny fizarana ny toetra kristianina. Izay tia te-hanome izay ananany. Handeha aho mba hanontany anareo raha efa nahita ny tenanao ao amin'ny fitaratra ny herinandro? Angamba ianao mieritreritra Oh Oh antitra aho ka lasa, Nämen ketrona maro izay voaraiko noho ny Andy ny namany Sary, na ianao dia afaka mahita, ô ô prettier mahazo isan'andro Andriamanitra dia tia ahy!
Ny fandinihana dia mahaliana marina? Efa ho 15 taona lasa izay dia nanana lavo indray sy misotro toaka be ary lasa nerbrottad ny mpiambina efatra sy polisy roa izay nanontany hoe manao ahoana ianao? Tsara dia tsy dia tsara amin'ny Andy nanana, araka ny dokotera izay niasa avy efa ho 4 isaky ny arivo eo amin'ny tena, izany hoe ny mety mahafaty toaka fanapoizinana, izany rehetra izany tamin'ny andro Noely!
Nihinana aho be rödbetsallad sy Hama amin'ny Morgan, namako, izay niaraka ara-dalàna. Izahay nandeha toerana ny antoko ary tao koa no blacked ka tsy hahatsiaro ny zavatra nataony aho, Tampoka teo Manana mpiambina efatra sy polisy roa, izay nitolona ahy tamin'ny tany.
Miaraka be toaka eo amin'ny tena ka naniraka ahy mba hameno ny sela izay indrisy spyde any amin'ny beetroot salady. Tena menatra aho, rehefa izy ireo handefa ahy an-trano, ary ny fehin-kibo nerspydd manodidina ny vozony, ary tsy misy ba kiraro, dia hiala amin'ny paositry ny polisy. Tamin'ny, fara fahakeliny 20 degre.
Fony aho an-trano, dia hahita ahy any amin'ny fitaratra ka nilaza hoe: "Tsy Izaho va no nahita anao teo aloha?". Tsy nisy tena tsara dia tsy ho eto anatrehako, dia fantatrareo, mameno marary tahaka aho.
Androany no fitaratra sary dia tsy mitovy, izao ianao faly ny an'i Jesoa Kristy sy ny ho zanany, na dia sy ny kileman-toetra sy ny fahadisoany.
Fandoroana fo izay ny fitaratra sary 'i Jesoa
Mila bebe kokoa ny fitiavan 'Andriamanitra ny olona hitantsika! Eritrereto tena teny isika, fa tsy maintsy tia ny namantsika? World mampihorohoro eny fanahiana ary dia ho ratsy kokoa noho ny zavatra hitantsika ankehitriny. Ny izao tontolo izao ny Kristianina izay mila fo ireo dia mandoro sy ny fitaratra izay maneho an'i Jesoa Kristy.
Ankehitriny dia afaka mahita ahy any amin'ny fitaratra
Ny fitaratra sary, tsy maintsy hikarakarana ny antsoina hoe voky manodidina amin'ny Morgan tsy mahafinaritra, dia nahatsapa toy izany rehefa afaka izany, ratsy. Ankehitriny dia afaka mahita ahy any amin'ny fitaratra ary any no mahita ny tsara tarehy voavotro namonjy lahy antitra 51 taona. Eny, tsy tia aho ny hafa rehetra, dia tsy maintsy hitombo ny namany Sary hita rehetra? Fa na inona na inona izany izaho sy ianao, ka tia an'i Jesosy Kristy.
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 04:11